Etu esi kpopu ọka na usoro 4 dị mfe - Nri
Etu ị ga-esi kpocha ọka na cob dị ka ezi Midwester
How Shuck Corn Cob Like True Midwesterner
Ọ bụrụ na ị tolitere n'ebe ọ bụla Midwest , ị nwere ike ileghachi anya azụ (ma ọ bụ na ọ bụghị) ụbọchị mgbe ọrụ ụtụtụ gị na-atụgharị ntị iri na abụọ ọka na ụzọ mbata azụ. Mana ọ bụrụ na ịzụta ọka na cob bụ ihe ọhụrụ nye gị, usoro nhichapu husk na silk na ntị ndị ahụ nwere ike iyi ihe siri ike, na-ewe oge ma na-agbagha. Enweghị nchekasị, enyi. Anyị bịara iji gosi gị otu ị ga-esi gbanye ọka n'akụkụ anọ dị mfe-peasy.
Njikọ: Etu esi echekwa oka na cob (gbakwunyere otu esi achota ihe kacha mma)
Digital Art nke McKenzie Cordell dere
Kwụpụ 1: Bee mpụta akwụkwọ
Nke mbu, gbachapu ahihia nke akuku, puo ahihia nke silk na akwa nkpuchi nke nkpuchi. Tụfuo akwụkwọ ndị ahụ — ma ọ bụ nke ka mma, kụọ ha.
Kwụpụ 2: Wepu tassel na ime ime
Ozugbo mpempe akwụkwọ dị na mpụga ga-apụrịrị, ị kwesịrị inwe ike wepu ihe fọdụrụ nke husk ahụ karịa. Thezọ kachasị mma iji mee nke a n'otu (ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu) dara bụ ịghọta tassel ahụ (ụyọkọ silk ahụ n'elu) yana ọnụ otu mpempe akwụkwọ ma kwatuo ya, wepụ otu akụkụ nke silk na husk n'otu oge. Tinyegharịa husk fọdụrụnụ, na-arụ ọrụ gburugburu ntị na ngalaba. Nwere ike ịhapụ husk ahụ jikọtara na njedebe ma ọ bụ na ọ bụghị; anyị ga-emeso nke ahụ na-esote.
Kwụpụ 3: Brehapụ nke fọdụrụ husk na stalk
N'oge a, ị kwesịrị ịnwe ntị dị ọcha nke ọka nwere eriri siri ike na-acha odo odo na ala (husk mmasị ma ọ bụ na ọ bụghị). Site na etinyere ọka were nwayọ mana gbasie ike n’otu aka, jiri aka gị nke ọzọ were kpọchie ngere ahụ. Composti ndị ahụ!
Kwụpụ 4: Hichaa silks na ntụpọ ọ bụla
Nọ nso ebe ahụ. Nzọụkwụ ikpeazụ bụ ikpocha silk ọ bụla nke ka na-arapara na ọka. You nwere ike iji nlezianya dị ka ịchọrọ ebe a, mana ọ bụrụ na ị na-esi ọka, sie na ọtụtụ silk ga-apụ na mmiri (yabụ echegbula ya Ọzọkwa ukwuu). Cornfọdụ ọka-shuckers na-eji ahịhịa ahịhịa iji kpochapụ silk na nooks na crannies ndị ahụ, mana anyị na-adụ ọdụ na nke ahụ. N'ihi gịnị? N'ihi na nkpuru ahu siri ike, na brushes ndị ahụ nwere ụzọ nke ịtụgharị ha na ero. Mba, daalụ.
Ugbu a, gaa ma sie ọmarịcha ọka ahụ na-enwu gbaa!
Etu ịhọrọ oke ọka kacha mma:
Ebuchala tupu ịzụta. Anyị na-ekwughachi: Mee ọ bụghị kpọọ tupu ịzụta! Ọ bụ ezie na ị nwere ike ị hụla ndị ọzọ na-azụ ọka na-akpụpụ mkpụ na ụkpa iji lelee mkpụrụ ahụ, nke a bụ ụkpụrụ ọka na-adịghị mma. Ọ na-eme ka mkpụrụ ndị ahụ nwee ike imebi ma kpọnwụọ, yabụ egbula ọka ọ gwụla ma ị maralarị na ị ga-azụ ya.
Nwee ọka. Jiri nwayọ (jiri nwayọ!) Pịgharịa ntị ọka iji chọpụta ogo kernel na ụdị ya. ’Re na-aga maka plump, ọbụna na ụba; gafere ma ọ bụrụ na ịnwere ike ịnwe oghere site na ndụ na-efu.
Zere silk akọrọ. Ozu ọka ahụ bụ eriri dị ka eri (aka the tassel) n'elu ntị. Ọka na-acha ọkụ ọkụ ga-enwe aja aja na-acha ọkụ, silk nke nnyapade. Ọ bụrụ na ọ kpọrọ nkụ ma ọ bụ oji, kwuo ya.
Choputa nkpuru ahihia ndu. Ọ bụrụ na husk (akụkụ mpụta nke ị na-amachapụ) na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma kechie ya, ọ bụ ezigbo ntị. N'ezie ọka ọhụrụ kwesịrị imetụ aka.
Ntụziaka 16 Iji ọka Ọhụrụ Eme
Ose Ore Carbonara
Summer Skillet Gnocchi na ọka Grill na Burrata
Cheater’s Skillet Lasagna ya na ọka na Tomato Tomato
30-Nkeji Creamy Chicken, ọka na Tomato Skillet
Corntọ Ọkụ Donut Oghere
White Risotto na Ọka, Carrots na Kale
Asara n’ọkụ Poblano na ọka Guacamole
Creamy Corntọ ọka Pappardelle
Ọka Fritter Caprese nwere piich na Tomato
Wayo Ọkụkọ na ọka na Poblano Salad
Pan-Seared Scallops na Citrusy Ọka Succotash
Anwụrụ Anwụrụ Ọka
Ahịa ọka Chowder na Nchekwa Oge Oge
Okporo Cornzọ ọka Mexico
Ọka Arịlị Griiz
Crock-ite ọka Chowder
Njikọ: Nri ọka Ọhụrụ 43 iji kporie ndụ n'oge ọkọchị niile
echiche ime ụlọ ime ụlọ
na -ehi ụra mgbe mgbatị ahụ gasịrị
oyi Elsa na anna obere
kacha mma nwa ntochi fim
jowar atta maka ifelata
esi kee ịchafụ n'isi